महोत्सवमय बन्यो पोखरा | eAdarsha.com
शुक्रबार सुरु भएको आइएमई नेपाल साहित्य महोत्सवको आठौं संस्करणको दोस्रो दिन शनिबार उत्तिकै उत्साहपूर्ण सहभागितामा विभिन्न सेसन सञ्चालन भए ।
शनिबारको पहिलो सेसन थियो, लोकगीत कि लोकप्रियता ? यो सेसनमा नारायण अमृतसँग गायक हरिदेवी कोइराला, प्रकाश सपुत र झुमा लिम्बूले छलफल गरे । यसमा विशेषगरी त्यो बेलाको लोकगीतको अवस्था अर्थात् लोकगीतको आफ्नोपन र वर्तमानमा यसमा आएका परिवर्तनबारे उनीहरुले छलफल गरे । साथै अहिलेका कतिपय विकृतिविसंगतिप्रति पनि उनीहरुले चर्चा गरे ।
सुरुवातमा सुन्न बनाइएको लोकगीत अहिले हेर्न बनाइएको जस्ता आरोप लागेको विषयमा पनि कार्यक्रममा बहस भयो । लोकगीतलाई जोगाउँदै सकारात्मक रुपमा यसलाई अघि बढाउनुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिए । यही समयमा बालबालिकाको हातमा मोबाइल कि पुस्तक ? शीर्षकमा गफिए, करुणा कुँवर, बिना थिङ तामाङ, वसन्त गौतम र भवसागर घिमिरे । उनीहरुले पछिल्लो समय बढ्दै गएको प्रविधिका कारण बालबालिकाका मानसिकतामा पारेको प्रभावबारे आआफ्ना धारणा राखे ।
यससँगै अर्काे सेसन रह्यो, दृष्टिदान । यो शीर्षकमा संवादमा थिए, नेत्रचिकित्सक सन्दुक रुइत र रवि लामिछाने । यसमा उनीहरुले नेपालमा अन्धोपनको समस्या मात्र केलाएनन्, त्यसमा भइरहेका पहलबारे पनि छलफल गरे । साथै डा. रुइतले पु¥याएको योगदानबारे पनि प्रस्तोता लामिछानेले केही सन्दर्भ उजिल्याए । रुइतले आफूले नेपालमा नेत्रचिकित्साको क्षेत्रमा गरेका र गर्न खोजेका विषयबारे आफ्ना धारणा राखे । साथै नेत्रचिकित्सको क्षेत्रमा अर्थात् नेपालमा कम शुल्कमा मोतियाबिन्दुको शल्यक्रिया हुने गरे पनि त्यसलाई औद्योगिक राष्ट्र एवम् विकसित मुलुकमा ५ हजार डलर लाग्ने उनले बताए । त्यसैले मोतियाबिन्दुको शल्यक्रिया नेपालका लागि वरदान सावित भएको रुइतको भनाइ छ ।
आफ्नो कर्ममा प्रतिबद्ध डा. रुइतले यसैमा आफू रमाएको बताए । साथै अहिलेको अवस्थामा आफूलाई राष्ट्रपतिको अफर आए पनि त्यसलाई नस्विकार्ने उनको भनाइ छ । आफ्नो कर्म आफ्ना लागि सबथोक भएको र सर्वसाधारणको सेवा गर्न पाउँदा त्यसले आफूलाई सर्वस्व दिएको उनले बताए ।
यही समयमा राजनीतिको अपराधीकरण, अपराधको राजनीतिकरण शीर्षक सेसन रह्यो । यसमा गफिए, देवेन्द्र सुवेदी, हरिबहादुर थापा र जनकराज सापकोटा । उनीहरुले नेपालमा बढ्दै गएको आपराधिक गतिविधि र तिनका नियन्त्रणका उपाय मात्र सुझाएनन्, राजनीतिक वृत्तमा पनि हाबी भएको अपराधीकरणले कसरी समस्या निम्तिँदै गएका छन् भन्नेबारे छलफल गरे । नेपालमा कसरी अपराधीकरण हाबी भइरहेको छ भन्नेमा वक्ताहरुले अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरणसमेत प्रस्तुत गरे । निर्वाचनताका जितका लागि उम्मेदवारहरुले कसरी गुन्डाहरुको सहारा लिन्छन् भनेर समेत यो सेसनमा छलफल भयो । साथै भ्रष्टाचारलगायत अभियोगमा बन्ने गरेका छानबिन आयोग पनि जनताको आँखामा छारो हाल्न मात्र गर्ने गरिएकोमा वक्ताहरुको भनाइ थियो ।
यसैगरी नेपाल नेक्सस – राजनीतिमा भूराजनीति सेसन पनि महोत्सवको आकर्षणका रुपमा रह्यो । यसमा नेता गगन थापा, पत्रकार सुधीर शर्मा र यादव देवकोटाले छलफल गरे । उक्त अवसरमा शर्माद्वारा लिखित अंग्रेजी पुस्तक नेपाल नेक्सस सार्वजनिकीकरण पनि गरियो । सेसनका अवसरमा नेपालमा बढ्दै गएको राजनीतिक हस्तक्षेप एवम् सीमा समस्या, राजनीतिक नेतृत्वमा देखिएको अदूरदर्शीपन, त्यसले निम्त्याएका समस्या, सीमा समस्या समाधानमा नदेखिएको पहल आदि विषयमा छलफल गरे । साथै भूराजनीतिमाथि भइरहेको राजनीतिबारे उनीहरुले विषद् व्याख्या विश्लेषण पनि गरे ।